2022 ၏အကောင်းဆုံးစျေးပေါကော်ဖီစက်များ - ဝယ်ယူခြင်းလမ်းညွှန်နှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များ
cappuccino ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကို ပြင်ဆင်ပါ။
Cold Brew သို့မဟုတ် Iced Coffee
သင် ကော်ဖီ (နှင့် အခြား ဖျော်ရည်များ) ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက သင် စဉ်းစားနေပါသည်။ အကောင်းဆုံး ကော်ဖီဖျော်စက်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက စျေးကွက်တွင်ရှိသော အမျိုးအစားများစွာကြောင့် မကြာခဏ မလွယ်ကူကြောင်း သင်သိပါလိမ့်မည်။ ကော်ဖီဖျော်စက် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဖို့ ခက်ခဲနေပြီဆိုရင်၊ ရှိနေတဲ့ မတူညီတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ မော်ဒယ်တွေရဲ့ အရေအတွက်ကြားမှာ သွားလာဖို့ ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။
မဆုံးဖြတ်ရသေးသော သုံးစွဲသူများအတွက်၊ သင့်စိတ်ကြိုက် ကော်ဖီဖျော်စက် အမျိုးအစားကို သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက် သင်သိလိုသမျှကို ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် သင်သိလိုသည်များကို သင်ကြားပြသပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော ကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် မော်ဒယ်များကို အကြံပြုထားသည်ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရရှိသောအရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောထုတ်ကုန် အမှုတစ်ခုစီအတွက်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ငွေပိုလျှံသုံးစွဲခြင်းမှ တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးရှိသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် သင့်တင့်မျှတသောစျေးနှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်ကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်သင် အရမ်းရှုပ်ထွေးမနေချင်ဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် သင့်မှာသေချာတဲ့အကြံအစည်တစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ကော်ဖီစက်တွေက ဘယ်ဟာလဲဆိုတာ သိဖို့ပဲ လိုပါလိမ့်မယ်။ အနှစ်ချုပ်အနေနှင့် အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ၊ ငါတို့ အကြိုက်ဆုံး ကော်ဖီစက်တွေရဲ့ ထိပ်:
Krups Nespresso Essenza...
Bosch Tassimo ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ကော်ဖီဖျော်စက် တစ်မျိုးတည်းသာ ရှိတာ မဟုတ်ရင် ရွေးချယ်မှု ပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ရှိတယ်။ လျှပ်စစ်စက်များ အကောင်းဆုံးရလဒ်များနှင့် အကြီးကျယ်ဆုံးသောနှစ်သိမ့်မှုကို ပေးဆောင်ရန် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည်၊ ရိုးရာကော်ဖီအိုးများ. ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ရှေးရိုးသမားများအတွက်သာမက ခေတ်အမီဆုံး ကော်ဖီဖျော်စက်များ နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။
သူတို့ကို ကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ပါ။ လက်ရှိ ကော်ဖီစက်အမျိုးအစားများ သင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနေသည့်အရာအရ အကောင်းဆုံးကော်ဖီဖျော်စက်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို သိရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စကားအနည်းငယ်ဖြင့် ပြောပြသည်-
အ လျှပ်စစ်ကော်ဖီဖျော်စက်များ ကော်ဖီ သို့မဟုတ် ဖျော်ရည်များကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်များဖြင့် ပြင်ပအပူရင်းမြစ်များကို အစားထိုးခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ဒီကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစား ပိုမြန်ပြီး လက်တွေ့ကျတယ်။ အိမ်အများစုအတွက်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် မိရိုးဖလာများကဲ့သို့ ကြီးကြီးမားမား သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ဤအဖွဲ့အတွင်း သင်တွေ့နိုင်သည်-
Capsule ကော်ဖီစက်များ: ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်သောကြောင့် လက်ရှိတွင် ရေပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။ သင်ပြင်ဆင်လိုသောကော်ဖီ သို့မဟုတ် ပြုတ်ရည်၏ဆေးတောင့်ကို သင်ရိုးရှင်းစွာရွေးချယ်ပါ (အချို့က သင့်အား ပူပူနွေးနွေး အအေးဖျော်ရည်များ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည်)၊ ၎င်းကို စက်ထဲသို့ထည့်ကာ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်ဖန်ခွက် သို့မဟုတ် ခွက် အသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏ ဖိအားစနစ်သည် ပါဝင်မှု၏ အရသာနှင့် ရနံ့ကို ထုတ်ယူရန် ဆေးတောင့်မှတဆင့် ရေနွေးကို ဖြတ်သန်းကာ ဖန်ခွက်/ခွက်ထဲသို့ တွန်းထုတ်မည်ဖြစ်သည်။
စူပါအော်တိုကော်ဖီစက်များ: ဤစက်များသည် ကော်ဖီစေ့များ သို့မဟုတ် ကော်ဖီစေ့များကို ရွေးချယ်နိုင်စေသည် (ပံ့ပိုးထားသော ဆေးတောင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ လွတ်လပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်)၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ယခင်စက်များကဲ့သို့ အာရုံစိုက်ရန် မလိုအပ်ပါ။ မည်မျှလုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိသောစနစ်ကြောင့် ၎င်းတို့ကို သင့်ကိုယ်သင် ရပ်တန့်ရန်မလိုဘဲ အချိန်မှန်တွင် ရပ်တန့်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့တွင် ယခင်အရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားသော အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိတတ်သည်။
လက်ဖြင့် Espresso စက်များ: စူပါအော်တိုမက်တစ်စက်များနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းတို့တွင် ကြိတ်စက်မရှိသည့်အပြင် ကော်ဖီကို ဖိခြင်းနှင့် ဖိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အချို့သော နို့အမြှုပ်များကို အလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အထူးအသားပေးကော်ဖီကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် အငွေ့ပြန်စေရန် ပါ၀င်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းပါရှိပါသည်။
တပ်ဆင်ပြီး ကော်ဖီဖျော်စက်များ: ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် စူပါအော်တိုကော်ဖီစက်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့ မီးဖိုချောင်တွင်သာ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် အဝတ်လျှော်စက်၊ ပန်းကန်ဆေးစက်၊ မီးဖိုများ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စသည်တို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ။
Drip သို့မဟုတ် အမေရိကန် ကော်ဖီဖျော်စက်များ: ၎င်းတို့သည် တစ်ခါသုံးစစ်ထုတ်မှုများနှင့် လျှပ်စစ်အပူအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုသည့် ပုံမှန်လျှပ်စစ်ကော်ဖီစက်များဖြစ်သည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကော်ဖီစေ့ကို သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ စက်သည် ရေနွေးကြမ်းကို ကော်ဖီစေ့မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းပြီး ရလဒ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲသို့ စိမ့်ဝင်စေရန် ဇကာဖြင့် စစ်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့သည် monodose မဟုတ်ပါ။ အချို့မှာ ရေနွေးအိုးပါသောကြောင့် ကော်ဖီပူပူကို နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် ထားပေးသည်။
အီတလီလျှပ်စစ်ကော်ဖီဖျော်စက်: အီတလီကော်ဖီစက်များ သို့မဟုတ် Manual Moka အိုးများနှင့် အသွင်အပြင်နှင့် လည်ပတ်ပုံနှင့် ဆင်တူသော်လည်း လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားသည်။ အီတလီကော်ဖီစက်အများအပြားသည် induction cookers များကိုမပံ့ပိုးနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏လျှပ်စစ်ဗားရှင်းတည်ရှိမှုကို သတိရပါ။
၎င်းတို့သည် ပြင်ပအပူရင်းမြစ်ပေါ်တွင် ဆက်လက်မှီခိုနေရသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များက တီထွင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကော်ဖီချစ်သူအများစုသည် ၎င်းတို့၏ကော်ဖီကို ပြီးပြည့်စုံသောကော်ဖီရသည်အထိ အသေးစိတ်အားလုံးကို အစမှအဆုံးထိန်းချုပ်ကာ ပြီးပြည့်စုံသောကော်ဖီကိုရရှိသည်အထိ ဤကော်ဖီစက်တွင် ၎င်းတို့၏ကော်ဖီကို ဆက်လက်ပြင်ဆင်လိုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် မြန်ဆန်ပြီး လူကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့အနက်၊
အီတလီကော်ဖီစက်များ: ၎င်းတို့သည် အောက်ခြေဧရိယာတွင် ရေတိုင်ကီပါရှိသော အလွန်ရိုးရှင်းသော ကော်ဖီစက်များဖြစ်သည်။ ဤသိုက်သည် ၎င်းကို အပူပေးပြီး ရေဆူစေရန် ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပြွန်တစ်ခုပေါ်သို့တက်ကာ မြေစိုက်ကော်ဖီတွေ့ရှိသည့် Filter မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ရနံ့ကို ထုတ်ယူပြီး အထက်ဧရိယာရှိ တိုင်ကီတစ်ခုသို့ စစ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
plunger ကော်ဖီဖျော်စက်များ: ပလပ်ဂါကော်ဖီဖျော်စက်တွင် ကော်ဖီနှင့် အခြားပြုတ်ရည်များကို ပြုလုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ ရေကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် (သို့) ဒယ်အိုးထဲတွင် ဆူအောင်အပူပေးကာ ကော်ဖီဖျော်စက်အတွင်းပိုင်းသို့ ပေါင်းထည့်ကာ ချက်ချင်သည့်အရာဖြင့် ပေါင်းထည့်ပါ။ သင်သည် အဖုံးကိုပိတ်ပြီး ပလပ်ဂါကို တွန်းထုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အနံ့အရသာရှိသောရေသည် သင့်ဇကာမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားကာ အောက်ပါအချက်များကို ချန်ထားနိုင်စေပါသည်။
Cona သို့မဟုတ် ဖုန်စုပ်ကော်ဖီဖျော်စက်များ: ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တီထွင်ခဲ့သော အလွန်ထူးခြားသော ကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အီတလီနိယာမနှင့် ဆင်တူသည်။ ဤကော်ဖီဖျော်စက်သည် ၎င်း၏အောက်ခြေကွန်တိန်နာတွင် ရေကိုပြုတ်ရန် မီး သို့မဟုတ် မီးဖိုကဲ့သို့သော ပြင်ပအပူရင်းမြစ်ကို အသုံးပြုကာ ဓာတ်ငွေ့ကို ချဲ့ထွင်ကာ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလုံးကို ချိတ်ဆက်သည့် ပြွန်မှတစ်ဆင့် အပေါ်ပိုင်းသို့ တက်လာစေသည်။ အဲဒီနေရာမှာ ကော်ဖီဖျော်ရမယ့်နေရာပါ။ ၎င်းကို အပူမှဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ အောက်ဇုန်ရှိလေသည် ကျုံ့သွားပြီး အပေါ်ဇုံမှ ကော်ဖီကို ဇကာတစ်ခုဖြင့် စုပ်ကာ လေဟာနယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖန်တီးသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ အောက်ခြေတွင် အဆင်သင့်သောက်နိုင်သော ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြစ်ပြီး ထိပ်တွင် ခိုင်ခံ့နေမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး၊ စက်မှုကော်ဖီစက်များ ၎င်းတို့သည် သီးခြားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ပိုစျေးကြီးတယ်၊ ပိုကြီးတဲ့ စက်တွေထက် သာလွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိတယ်။ ၎င်းသည် သင့်အား ကော်ဖီကို လျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်စေပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် ကော်ဖီအများအပြားကို တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အိမ်သုံးအတွက် ဝယ်သူအများအပြားရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကော်ဖီဆိုင်များ၊ ဘားများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များကဲ့သို့သော ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
အခုချိန်ထိ ပြောထားတဲ့ စကားတွေကို ဆက်ပြီးတော့ ဒီဟာတွေ ရှိတယ်။ အကောင်းဆုံး ကော်ဖီဖျော်စက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော ကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစားများအလိုက် ခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ အမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးအစားအလိုက် ယခုနှစ်တွင် ငွေတန်ဖိုးအသက်သာဆုံးဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်-
De'Longhi သည် ကော်ဖီအတွက် အကောင်းဆုံးစက်များထဲမှ တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ Dolce Gusto ဆေးတောင့် သင်ရှာတွေ့နိုင်သည် ပါဝါ 1500w နှင့် လျှင်မြန်သော အပူပေးစနစ်ဖြင့် ကော်ဖီကို အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် တစ်မိနစ်စောင့်စရာမလိုပါ။ ၎င်း၏ ဖိအား 15 ဘားဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော အရသာကိုရရှိရန် ကော်ဖီ သို့မဟုတ် ပြုတ်ဆေးတောင့်များမှ အကောင်းဆုံးအားလုံးကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် 0,8 လီတာဆံ့သောရေတိုင်ကီကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို အားပြန်ဖြည့်စရာမလိုဘဲ ကော်ဖီအများအပြားကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့သော စိတ်ဝင်စားဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ထင်ရှားသည်။ အပူ သို့မဟုတ် အအေး ဖျော်ရည်များ ပြင်ဆင်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးဇူးကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ အတိုင်းအတာ လျှော့ချရန် အချိန်တန်သောအခါ သတိပေးသည်။.
ကော်ဖီစက်များ၏ အီတလီထုတ်လုပ်သူသည် ဤစက်၏ဒီဇိုင်းကို စတီးလ်စတီးလ်ဖြင့် အသေးစိတ်ပြုလုပ်ထားပြီး ဤစက်ကို သင်ထားရာနေရာကို အလှဆင်မည့် ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဤစက်၏ဒီဇိုင်းကို ဂရုစိုက်ပါသည်။ လည်း ပါဝင်သည်။ flow-stop လုပ်ဆောင်ချက် ဂျက်လေယာဉ်ကို အလိုအလျောက်ရပ်တန့်ရန်၊ ခွက်နှင့်မျက်မှန်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သော drip tray၊ လှုပ်ရှားမှုမရှိပြီးနောက်5မိနစ်အကြာတွင် အလိုအလျောက်ပိတ်ရန်၊ စသည်တို့။
နာမည်ကြီးထုတ်လုပ်သူ Krups သည် ကော်ဖီအတွက် အကောင်းဆုံးစက်များထဲမှ နောက်ထပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ nespresso ဆေးတောင့်များ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှာလို့ရတယ်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဤကျစ်လျစ်ပြီး ပေါ့ပါးသောစက်တွင် အမြင့်မားဆုံး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သော၊ ergonomic လက်ကိုင်နှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်။
၎င်းတွင်ဖွင့်ရန်ခလုတ်တစ်ခုပါရှိပြီး၊ 25 စက္ကန့် အကောင်းဆုံးကော်ဖီကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့အပူချိန်မှာ ရေနဲ့ အသင့်ဖြစ်သွားမှာပါ။ အားလုံးကို အတို သို့မဟုတ် အရှည်အတွက် ခလုတ်များ (Espresso နှင့် Lungo) ဖြင့် ခွက်အရွယ်အစား ချိန်ညှိမှုဖြင့် 0.7 လီတာ ဆံ့တိုင်ကီဖြင့် ကျွေးသည်။
၎င်း၏စွမ်းအားနှင့်ဖိအား 19 ဘား ဆေးတောင့်များမှ ကော်ဖီစေ့၏ အမွှေးအကြိုင်အားလုံးကို ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် ကော်ဖီကောင်းတစ်ခွက်မှ မျှော်လင့်ထားသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ၎င်းတို့က အာမခံပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကော်ဖီစက်များကို မနာလိုရန် အနည်းငယ်မျှသော ဖိအားတစ်ခု။
ဒါဟာအစရှိပါတယ် anti-drip စနစ်နှင့် အလိုအလျောက်ပိတ်စနစ်9မိနစ်ထက်ပို၍ အသုံးမပြုဘဲထားလျှင်။
Bosch TAS1007 Tassimo
သင်ပိုနှစ်သက်လျှင် Tassimo ဆေးတောင့်များထုတ်လုပ်သူ Bosch သည် ဤစားသုံးနိုင်သောကုမ္ပဏီအတွက် အကောင်းဆုံး capsule ကော်ဖီစက်များကို ပေးပါသည်။ ပါဝါ 1400w၊ 0.7 လီတာ တိုင်ကီ နှင့် ကျစ်လစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဒီဇိုင်းသည် ဤစက်ကို အားဖြည့်ပေးပါသည်။
၎င်းနှင့်အတူသင်ရွေးချယ်မှု၏အရသာများကိုခံစားနိုင်သည်။ အချိုရည် 40 ကျော် မူရင်းအရသာ အားလုံးနဲ့ ပူတယ်။ ရှုပ်ထွေးသောဆက်တင်များမရှိပါ၊ သင်အလိုရှိသောဆေးတောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး သင့်ခွက် သို့မဟုတ် ဖန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်စောင့်ပါ (အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက်ချိန်ညှိနိုင်သောပံ့ပိုးမှုဖြင့်)။
စောင့်ရှောက်ရန် သန့်ရှင်းသော ကော်ဖီဖျော်စက် ကော်ဖီဖျော်စက်ကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း ကော်ဖီဖျော်စက်တွင် အနံ့အရသာများ ရောနှောခြင်းမရှိစေရန် ဖိအားပေးထားသော ရေနွေးငွေ့သန့်စင်သည့်စနစ်ပါရှိပြီး မတူညီသောအဖျော်ယမကာကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ချက်ချင်းအဆင်သင့်ထားလိုက်ပါ။
Bosch TAS1007 Tassimo...
Philips HD6554/61 Senseo
ဥရောပအမှတ်တံဆိပ်များအနက်မှ နောက်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှာ Philips ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကော်ဖီဖျော်စက်ရဲ့ မော်ဒယ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ senseo capsules တွေ၊ သင်ချစ်လိမ့်မည်။ ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အရောင်အသွေး အစုံအလင်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ကြိမ်တည်းပြုလုပ်ထားသော်လည်း ပြင်ဆင်နိုင်စေမည့် ထူးခြားသောကော်ဖီဖျော်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကို တပြိုင်တည်းသောက်ပါ။. အရာအားလုံးကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ အချိန်မရွေး လိုချင်သော ရှည်လျားပျော့ပျောင်း၊ တိုတိုနှင့် ခိုင်ခံ့သော ကော်ဖီ၏ပြင်းထန်မှုကို ရွေးချယ်ပြီး ချက်ချင်းရလဒ်ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။
La ကော်ဖီ Boost နည်းပညာ ဆေးတောင့်တစ်ခုစီ၏ အရသာအားလုံးကို ၎င်း၏ဖိအားဖြင့် ထုတ်ယူရန်သေချာစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရသာကို အာမခံပါသည်။ ထို့အပြင် Crema Plus နည်းပညာသည် အခြားလျှပ်စစ်ကော်ဖီစက်များထက် crema အလွှာပို၍ ချောမွေ့ကြောင်း သေချာစေသည်။ ၎င်းကို အသုံးမပြုပါက ၎င်း၏ စွမ်းအင်ချွေတာရေးနည်းပညာသည် မိနစ် 30 အတွင်း အလိုအလျောက် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Oroley 12 ခွက်
အော်ရိုလီ ဤအမျိုးအစားကို သင်ဝယ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အီတလီ ကော်ဖီဖျော်စက်များ. လူတော်တော်များများက ကော်ဖီကို ဒီရိုးရာကော်ဖီဖျော်စက်နဲ့ ပြင်ဆင်ရတာကို နှစ်သက်ကြတာကြောင့် အရသာပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့လည်း ပါတယ်။ တာရှည်ခံပြီး စျေးပေါတယ်။.
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အလူမီနီယမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။induction မှလွဲ၍ မီးဖိုချောင်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်း၏ရေစည်သည် 12 ခွက်အတွက်စွမ်းရည်ပါရှိပြီးလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတွင် မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ရန် ဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင်လည်း ပါဝင်သည်။
ရယ်မောသံကို နားထောင်ပြီး ၎င်း၏ရနံ့ကို ရှူရှိုက်ရင်း ခေတ်ဟောင်းနည်းအတိုင်း ကော်ဖီကို နှစ်သက်ရန် စစ်မှန်သော ဂန္တဝင်တစ်ခု။ သင့်အိမ်မှာ မေ့ပျောက်လို့မရနိုင်တဲ့ အရသာရှိတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်အပြင်၊ အီတလီ ကော်ဖီစက်များသည် ထူးခြားသော အထိအတွေ့ကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အဲဒါက သတိမပြုမိဘဲ သင့်မီးဖိုချောင်ကို ဥပဓိရုပ်အများကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။
ကြိုက်ရင် တစ်ခုပေါ့။ စူပါအော်တိုကော်ဖီဖျော်စက်သင်တွေ့ရမယ့် အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အီတလီပါ။ De'Longhi Ecam Magnifica15 bar ဖိအား၊ 1450w ပါဝါ၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော 1.8 လီတာဆံ့ရေတိုင်ကီ၊ အချက်အလက်ကြည့်ရှုရန် LCD panel၊ cappuccino စနစ်၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သော ကော်ဖီသေနတ်နှင့် အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေး။
သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည် အမြင့်ဆုံး ကော်ဖီစက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းပေးဆောင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပမာဏသည် အံ့မခန်းဖြစ်ပြီး ကော်ဖီ၏အဆုံးသတ်သည် ရိုးရှင်းပါသည်။ လတ်ဆတ်သောကော်ဖီ ထိပ်နှင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်၎င်း၏အလိုအလျောက်ကြိတ်စက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်ကော်ဖီကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။.
ဒီအိမ်သုံး ကော်ဖီဖျော်စက်အကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်များကို ကော်ဖီကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် သဘောကျမှာပါ။ ထို့အပြင်၊ ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကို တပြိုင်နက်တည်း ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Capsules ပေါ်မူတည်၍ မဟုတ်ဘဲ၊ သင်အနှစ်သက်ဆုံး ကော်ဖီကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခိုင်မာသော De'Longhi သည် သင်ကောင်းကောင်းရှာနေပါက အခြားအလွန်ကောင်းသော မော်ဒယ်ကိုလည်း ပေးပါသည်။ လက်မောင်း ကော်ဖီဖျော်စက် အိမ်အတွက်။ ဤကော်ဖီဖျော်စက်ဖြင့် 1350 W နှင့် ၎င်း၏ 15 စင်တီမီတာ ကျဉ်းမြောင်းသော ရိုးရာစုပ်စက်ကြောင့် ၎င်း၏မြင့်မားသောဖိအားကြောင့် အရသာရှိသော ကော်ဖီများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၃၅ စက္ကန့်အတွင်း ရေကို မှန်ကန်သော အပူချိန်သို့ အပူပေးရန် Thermoblock စနစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ရာတွင် သင့်အား ပိုမိုလွတ်လပ်စွာပေးဆောင်ရန် ၎င်းသည် မည်သည့်ကော်ဖီနှင့်မဆို "Easy Serving Espresso" pods ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအရာက မင်းရဲ့ 360º လှည့်ထားသော လက်မောင်း «capuccinatore» သင်ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Barista တစ်ယောက်လို အကောင်းဆုံး နို့အမြှုပ်တွေနဲ့ cappuccino တွေကို ရရှိဖို့ပါ။
လုံခြုံသောအလောင်းအစားနှင့်အတူ ပိုက်ဆံအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးတစ်ခု ကော်ဖီပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို နှစ်သက်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
De'longhi အနုမောဒနာ -...
အရောင်းရဆုံး အော်တိုကော်ဖီစက်တွေထဲမှာ Oster Prima Latte၎င်းသည် အမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းသည့်အရာအတွက် မျှမျှတတ ချိန်ညှိထားသောစျေးနှုန်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အရသာရှိသော cappuccinos ၊ lattes ၊ espressos ၊ အပြင် နွားနို့ပြုတ် ကောင်းသောအမြှုပ်ရရန်။
ဒဏ္ဍာရီလာ espresso စက်၊ ဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ကော်ဖီကြိုက်သူများစွာ၏ အကြိုက်ဆုံး အရသာအတွက်ကတော့ တခြားစက်တွေထက် ဈေးပိုသက်သာတယ်။
သူ့မှာ ရေကန်တစ်ခု ရှိတယ်။ 1.5 လီတာစွမ်းရည်နောက်ထပ် 300 မီလီလီတာနို့ကန်နှင့်အတူ။ ၎င်း၏ 1238 W ပါဝါကြောင့် လျှင်မြန်စွာ အပူပေးနိုင်သည်။
ဒါဟာရှိပါတယ် ဖိအား 19 ဘား ကော်ဖီမှ အများဆုံးထုတ်ယူရန်၊ ရလဒ်ကို creaminess များစွာပေးသည်။ ပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ကူပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားဖို့ နို့ဘူးကို ဖယ်ရှားဖို့တောင် ခွင့်ပြုပါတယ်။
စက်ရဲ့ ဒုတိယဗားရှင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ Oster Prima Latte IIပိုကြီးသော ပါဝါနှင့် စွမ်းရည်ဖြင့်၊ purists များသည် မူရင်းကို ပိုနှစ်သက်ကြသော်လည်း၊ ၎င်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာ အလောင်းအစားတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Cecotec Cafelizzia 790 တောက်ပြောင်သည်။
ဤ Cecotec လျှပ်စစ်ကော်ဖီဖျော်စက် ဒီအမျိုးအစားထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစက်ရုပ်များ၏ ကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူသည် ၎င်း၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ဒီဇိုင်း၊ ကျစ်လစ်သော ကော်ဖီစက်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
သွင်းပေးရန်အတွက် ရေကိုအပူပေးရန် 1350w ပါဝါရှိပြီး မြန်ဆန်စေရန် Thermoblock၊ 20 ဘား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ဖီစက်များကဲ့သို့ အကောင်းဆုံးသောခရင်မ်နှင့် အမြင့်ဆုံးရနံ့ကိုရရှိရန် ဖိအားပေးခြင်း၊ နို့အရည်ကြည်နှင့် အကောင်းဆုံးအမြှုပ်များရရှိစေရန် ရေနွေးငွေ့ပါဝင်ခြင်း၊ ပြုတ်ရည်များပြင်ဆင်ရန်အတွက် ရေနွေးထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ 1.2 လီတာဆံ့သော တိုင်ကီတစ်ခုနှင့် anti-drip စနစ်။
Cecotec Express ကော်ဖီ...
Melita Look Therm Deluxe
သင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင် အမေရိကန် သို့မဟုတ် drip ကော်ဖီဖျော်စက်များGerman Melitta သည် သင်ဝယ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 1000w (ထိရောက်သော အတန်းအစား A) ပါဝါ 1.25 လီတာ ဆံ့သော XNUMX လီတာနှင့် stainless steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စစ်စစ်ထုတ်သည့် ကော်ဖီဖျော်စက်ဖြစ်သည်။
ကော်ဖီခွက်၏ isothermal insulation ကြောင့် အရသာရှိပြီး အနံ့အရသာရှိသော ကော်ဖီခွက် အရှည် သို့မဟုတ် တိုတိုကို ရွေးချယ်ရန် ကော်ဖီခွက်ကို ၂ နာရီကြာအောင် ပူအောင်ထိန်းထားနိုင်သော thermos ပါရှိပါသည်။ ၎င်းတွင်အဖုံးတစ်ခု၊ ယိုစိမ့်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာကိုင်ဆောင်ထားသူ၊ 2×1 စစ်ထုတ်မှုများအတွက် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လက်ကိုင်၊ decaling အစီအစဉ်၊ ရေမာကျောမှုကို ချိန်ညှိပေးပြီး ပန်းကန်ဆေးစက်သည် ဘေးကင်းပါသည်။
Melita Look Therm Deluxe...
Cona Size D-Genius
ဒါဟာ တကယ့်အရာပါ။ Cona ကော်ဖီဖျော်စက် သို့မဟုတ် လေဟာနယ်. စျေးကွက်တွင်၎င်းကိုအတုယူရန်ကြိုးစားသောအခြားအလားတူပစ္စည်းအများအပြားရှိသော်လည်း Cona ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် Cona ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဤရိုးရာကော်ဖီထုတ်လုပ်သူ၏မူလဒီဇိုင်းအပြင်၎င်း၏စစ်မှန်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကွန်တိန်နာ နှစ်လုံးဖြင့် ဥရောပတွင် ထုတ်လုပ်သည်။ borosilicate ဖန်ခွက် အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကော်ဖီ၏ရနံ့နှင့် ဂုဏ်သတ္တိအားလုံးကို ထုတ်ယူပေးမည့် စစ်မှန်သောစနစ်ဖြင့် ၎င်းကိုထူးခြားသော လေဟာနယ်စုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
Cona ကော်ဖီဖျော်စက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် လေးနက်သော စီးပွားရေး၊ စတိုင်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံး. ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အတုအယောင်များမှ ပြေး၍ မူရင်း Cona ကိုရှာဖွေရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်းတံဆိပ်ခေါင်းသည်အတုမရှိနိုင်ပါ။
CONA အရွယ်အစား D-Genius...
ကြိုက်ရင်သုံးပါ။ plunger ကော်ဖီဖျော်စက်များBodum သည် သင်ဝယ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးနှင့် စျေးအသက်သာဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကော်ဖီဖျော်စက် ရှိတယ်။ ခိုင်ခံ့သော borosilicate ဖန်ကွန်တိန်နာတစ်ကြိမ်လျှင် 8 ခွက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်း၊ ပေါင်းစပ်ဇကာပါရှိသော ပလပ်ဂါတစ်ခု။
ပွက်ပွက်ဆူလာသည်အထိ ရေနွေးကို အပူပေးကာ ကော်ဖီဖျော်စက်သို့ ပြင်ဆင်လိုသော ပြုတ်ရည်ကို ထည့်ကာ ပြုတ်ပြီး ပလပ်ဂါကို ဖိထားလိုက်ပါ။ အကြောင်းရင်းအားလုံးကို စစ်ထုတ်ပါ။ နောက်ကွယ်မှာ ပိတ်မိနေပါစေ။ ဒီနည်းက မင်းရဲ့အရက်ကို ချက်ချင်းရလိမ့်မယ်။
ဤကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစားသည် သင့်အဘိုးအဘွားများထဲမှ တစ်ဦးထက်ပို၍ သတိပေးလိမ့်မည်။ စျေးသက်သက်သာသာ၊ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော၊ သယ်ယူရလွယ်ကူသော ရွေးချယ်မှု ၎င်းသည် အမျိုးမျိုးသော ဖျော်ရည်ပြုလုပ်ရန်လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
Bodum 1913-01 ကော်ဖီ...
Lelit သည် အော်တိုကော်ဖီစက်များအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံး ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင် သန့်စင်ရန်လွယ်ကူသော stainless steel၊ ပေါင်းစပ်ကော်ဖီစေ့ကြိတ်စက်၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည် 3.5 လီတာရေတိုင်ကီ၊ ပါဝါ 1200 W နှင့် ဖိအားမြင့်စနစ်တို့နှင့်အတူ။
ကော်ဖီမှုန့်ခြောက်ရန် 3-way valve ပါရှိပြီး၊ ဦးခေါင်းအုပ်စု တစ်ကြိမ်လျှင် ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် ကြေးရေနွေးအိုးတစ်လုံးကို ပြင်ဆင်ရသည်။ ကော်ဖီစေ့များ၊ ကော်ဖီစေ့များနှင့် ကော်ဖီစေ့များ နှစ်မျိုးလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင် အငွေ့ပျံပြီး ကောင်းသောအမြှုပ်ထွက်သည့်စနစ်လည်း ပါဝင်သည်။
အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း ကော်ဖီဖျော်စက်သည် “ကော်ဖီချစ်သူများအတွက်သာ” လုံးဝ သံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အချောထည်သည် အံ့မခန်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အလိုအပ်ဆုံး ကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူများ၏ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
Lelit PL41TEM အန်နာ၊...
ကော်ဖီဖျော်စက်ကို ရွေးချယ်နည်း- အဆင့်ဆင့် အကျဉ်းချုပ်
အရာများ ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟု သင်ထင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေရန် ကြိုးစားပါမည်။ ကော်ဖီဖျော်စက်ကို ရွေးဝယ်ပါ။. ပထမဆုံး သတိထားရမယ့်အချက်က မင်းဘာတွေရှာနေလဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ထင်သာမြင်သာရှိသော အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့တွင် ဤမျှမရိုးရှင်းပါ။ ယခုစဉ်းစားပါ။ သင် လိုချင်သော အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်၏အနာဂတ်ကော်ဖီအိုးပြင်ဆင်ရန်
ကော်ဖီပဲရှိတယ်။− Nespresso၊ Senseo၊ အီတလီ၊ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သော၊ လက်မောင်း၊ စူပါအော်တိုမက်တစ်၊ drip သို့မဟုတ် American၊ Cona နှင့် စက်မှုဆေးတောင့်များ (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ဆိုလျှင်) တို့ကို သင်ရွေးချယ်ရပါမည်။ ဤအတောအတွင်း၊ သင်သည် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှု အနည်းအများ လိုချင်သည်ဖြစ်စေ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို လျှော့ချနိုင်သည်-
Automático- Nespresso capsules၊ Senseo၊ ပေါင်းစပ်နိုင်သော၊ လက်တံ၊ စူပါ-အလိုအလျောက်။
လက်စွဲ: drip သို့မဟုတ် အမေရိကန်၊ Cona သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်း။
အခြားသော ဖျော်ရည်များ (လက်ဖက်ရည်၊ chamomile၊ သံပုရာဗာလစံစေး၊ valerian၊ ...)- Dolce-Gusto၊ Tassimo သို့မဟုတ် plunger ကော်ဖီဖျော်စက်ကို သင်ရွေးချယ်ရပါမည်။ ယခင်ကိစ္စများတွင်ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်သည်။
AutomáticoDolce-Gusto သို့မဟုတ် Tassimo ဆေးတောင့်များမှ။
လက်စွဲ: plunger ။
သင်ပြင်ဆင်လိုသည့်အရာအလိုက် မည်သည့်စက် သို့မဟုတ် ကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစားကို လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသည်နှင့် မည်သည့်အရာများကို ဆုံးဖြတ်ရန် အောက်ပါပုံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကော်ဖီဖျော်စက် အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ကွာခြားချက်ထို့ကြောင့် သီးခြားတစ်ခုအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းကို အပြီးသတ်ပါ-
ဆေးတောင့်များ: မြန်ဆန်၊ ရိုးရှင်းပြီး လက်တွေ့ကျသည်။
Nespressoရလဒ်သည် အလွန်ပြင်းထန်သောကော်ဖီဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အနံ့အပြင် မှန်ကန်သော texture ပါရှိသည်။ ကော်ဖီတောင့်များသည် Dolce-Gusto သို့မဟုတ် Tassimo နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ အကန့်အသတ်ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ကော်ဖီမျိုးကွဲများကိုသာ ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း ထိုမျှသာဖြစ်သည်။
Dolce Gustoတွဲချိတ်ခြင်း- ပြင်းထန်သောကော်ဖီ၊ ကောင်းသောအနံ့၊ ကောင်းသောအမြှုပ်နှင့် အသွင်အပြင်။ ကော်ဖီတောင့်မျိုးစုံ (espresso၊ အစက်အပြောက်၊ ဖြတ်၊ ကဖိန်းဓာတ်မပါသော၊...) အပြင် နို့လက်ဖက်ရည်၊ လက်ဖက်ရည်အေးနှင့် အခြား ရေနွေးကြမ်း အအေးများပါရှိသော ကော်ဖီတောင့်မျိုးစုံဖြင့်။
တေးစီ: အရည်အသွေးသည် ယခင်နှစ်ခုကဲ့သို့ မမြင့်မားသော်လည်း၊ ၎င်းသည် အလားတူရလဒ်များကို ပေးစွမ်းသည်။ ထို့အပြင်၊ Dolce-Gusto ကဲ့သို့ပင် သင်တွေ့နိုင်သော ဆေးတောင့်များသည် အလွန်ကွဲပြားပါသည်။ ကော်ဖီမှသည် ဖျော်ရည်များ နှင့် အခြားသော နာမည်ကြီး ပါတီဖျော်ရည်များအထိ။ အမျိုးအစားပေါင်း ၄၀ ကျော်ဖြင့်၊ အခြားအရာများထက် အမျိုးမျိုးကို ရှာဖွေနေပါက ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Senseo: ၎င်းသည် Nespresso ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားအလိုက် ပိုမိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကော်ဖီ၏အရည်အသွေးသည် Tassimo နှင့်ဆင်တူသည်။
စူပါအလိုအလျောက်၊ လက် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။: ဤသုံးမျိုးသည် တူညီသောရလဒ်များရှိသည်။ ကော်ဖီထဲတွင် ရရှိသော ကော်ဖီများနှင့် ဆင်တူသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်မှုလုပ်ငန်းကော်ဖီစက်များနှင့် အခြားလျှပ်စစ် သို့မဟုတ် ရိုးရာဆေးတောင့်များတွင် သင်မအောင်မြင်နိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် အမြှုပ်များကို ဖန်တီးရန် အငွေ့ထုတ်ဆေးလက်တံ၏ အားသာချက်ဖြင့်။
အခြားလျှပ်စစ်: American သို့မဟုတ် drip ကော်ဖီအတွက်၊ ယခင်ကော်ဖီများကဲ့သို့ လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်၊ ကော်ဖီ၏ရလဒ်သည် အလွန်သန့်ရှင်းသောကြောင့် မတူညီသောရနံ့နှင့် အရသာများကို နှစ်သက်စေပါသည်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကော်ဖီကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့ ချစ်သူတွေက သူတို့ကို သိပ်တန်ဖိုးထားလေ့မရှိပါဘူး။ အဲဒီအစား၊ ကော်ဖီကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးနိုင်တဲ့ ဈေးသက်သာတဲ့ တစ်ခုခုကို ရှာနေတဲ့သူတွေ၊ ကော်ဖီအများကြီးကို တစ်ခါတည်းချက်ပြီး တစ်ခါတည်း မစားရတဲ့သူတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။
Tradicionales: လုပ်ငန်းစဉ်သည် ယခင်လုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့ အဆင်မပြေပါ။ ရလဒ်ရရှိသည်အထိ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အီတလီ: သူတို့သည် သင့်အား အလွန်သိသာထင်ရှားသော အနံ့ရှိသော ကော်ဖီကောင်းကို ပြင်ဆင်နိုင်စေပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ် နှေးကွေးသော်လည်း ၎င်းတို့သည် စျေးသက်သာပြီး အသုံးပြုရန် မရှုပ်ထွေးပါ။ သို့သော်လည်း အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ခွက်ထက်ပို၍ ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။
cone: ၎င်းတို့သည် Cona စစ်မှန်ပါက၊ ရလဒ်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကော်ဖီကို အခြားသူများထက် အပူချိန်နိမ့်သော (70ºC ခန့်) တွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကော်ဖီသည် အခြားအမျိုးအစားများထက် ၎င်း၏ ဇီဝကမ္မသတ္တိကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။
ပလပ်ဂါ: ၎င်းတို့သည် ယခင်ရလဒ်များနှင့် ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့၏ အကြီးမားဆုံး ခွန်အားမှာ ၎င်းတို့သည် အလွန်စျေးသက်သာပြီး ခေတ်မီသောပစ္စည်းများကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို မသိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဘဝများကို မရှုပ်ထွေးချင်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် စံပြဖြစ်ပေသည်။
စက်မှုဇုံ: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်၊ ၎င်းတို့ကမ်းလှမ်းသည့်အင်္ဂါရပ်များကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရသာများနှင့် အသွင်အပြင်များရရှိခြင်း။ သူတို့က ပိုစျေးကြီးပြီး ပိုကြီးတယ်။ ဤ espresso စက်အမျိုးအစားများ လည်းရှိသော်လည်း စူပါအော်တိုမက်တစ်စက်များ ပါသော်လည်း၊
သင်အသုံးပြုသည့် ကော်ဖီဖျော်စက်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကော်ဖီတစ်မျိုး သို့မဟုတ် အခြားကော်ဖီတစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကော်ဖီဖျော်စက်သည် ကော်ဖီအမျိုးအစားများစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့် လှည့်ကွက်များရှိသည်။ အမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိလဲ သိလား။ ကော်ဖီတောင့ ရှိသလား ရွေးချယ်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ အကောင်းဆုံးကော်ဖီ? သင်ဝယ်လျှင် ကော်ဖီစေါဘယ်လို ကြိတ်ရမလဲ။
ကော်ဖီကမ္ဘာကြီးက ကျယ်ပြောလှပြီး ဒီဖျော်ရည်ကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်စရာ အရေအတွက်ကြောင့် အံ့သြမိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကော်ဖီ အတွေ့အကြုံကို ထူးခြားသည့်အရာအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။. လူများစွာအတွက် ဓလေ့တစ်ခုပင်။ သို့သော် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပုံရသော ဆက်စပ်ပစ္စည်း အများအပြားရှိပါသည်။ နွားနို့ creaminess တွင်ထူးချွန်အောင်မြင်ရန်၊ ကော်ဖီကြိတ်စက်များ ပြီးပြည့်စုံသော texture သို့မဟုတ် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကော်ဖီကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် thermoses. ထွက်ခွာသည်။
2 ကော်ဖီစက်အမျိုးအစားများ- စံနမူနာကဘာလဲ။
3 အရောင်းရဆုံး ကော်ဖီဖျော်စက်များ
3.3 Bosch TAS1007 Tassimo
3.4 Philips HD6554/61 Senseo
3.5 Oroley 12 ခွက်
3.6 De'Longhi Magnifica S Ecam 22.110.B
3.9 Cecotec Cafelizzia 790 တောက်ပြောင်သည်။
3.10 Melita Look Therm Deluxe
3.11 Cona Size D-Genius
4 ကော်ဖီဖျော်စက်ကို ရွေးချယ်နည်း- အဆင့်ဆင့် အကျဉ်းချုပ်
6 ကော်ဖီဆက်စပ်ပစ္စည်းများ- မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Cona ကော်ဖီစက်များနှင့် ဖုန်စုပ်ကော်ဖီစက်များ
Dolce Gusto ကော်ဖီစက်များ
စျေးသက်သာသော Nespresso ကော်ဖီစက်များ
ဈေးသက်သာသော ကော်ဖီစက်များ 2022 - သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - Contacto